Waa Maxay Caddaynta Dakhliga ‘Income Statement? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxaad ku qiimeysaa horumarka? ||Tukesomalism.com
Qeybinta Suuqa *Market Segmentation
Cabdijabaar Sh. Axmed — July 23, 2019
Waa Maxay Caddaynta Dakhliga?
Sida aan u malaynaayo Eraygaan ‘Income statement waxaad ku maqashay luuqada ingiriiska oo kali. Waxaan isku dayey inaan raadiyo macnaha dhabta ah ee Afsoomaali ahaan waxa uu noqon karo eraygaan ‘Income statement, balse ma aanan helin. Sidaa awgeed waxaan isku dayey inaan eray-bixin u sameeyo.
Income statement’ waa labo eray oo la isku keenay, waxaan u kala saaraynaa sida tan:,
Income, oo ah dakhli iyo statement oo ah, bayaan.
Mala dhihi karaa Bayaan Dakhli, ama Dakhli Bayaan? Aniga aragtideyda uma malaynaayo inay sidaasi sax ku tahay, maxaa yeelay eray bixinta waa in marwalbo laga fiiriyaa sida ugu macquulsan ee noqon kara macnaha guud ama ka bixin kara sharaxaad guud.
Eray-bixin (Terminology) waa shuruudaha farsamada gaarka ah ee loo adeegsado ganacsiga, farshaxanka, sayniska, ama maaddada qaaska ah.
Eray-bixin waa erayo iyo erayo isku dhafan ama tibaaxyo badan oo erey ah oo macnahoodu gaar yihiin la siinayo macno gaar ah – kuwan ayaa laga yaabaa inay ka leexiyaan macnaha ereyada isku mid ah marka loo eego xaaladaha kale iyo luuqaddaha.
Sidaas awgeed haddii aan u kuur-galo qaabka aan eray-bixintaas u sameeyay ayaa ahayd ‘waxaan ka soo qaatay macnaha guud ee Income statement. Income statement ayaa ah habbabka maaliyadeed ee loo maro marka la rabo in la ogaado dakhliga shirkada soo gala.
Waa caddeyn maaliyadeed oo muujineysa faahfaahinta dakhliga ganacsiga, kharashyada, khasaaraha, iyo faa’iidooyinka muddada go’an.
Waa sababtaas, sababta aan eray-bixintaas ugu sameeyay ‘caddeynta dakhliga.
Hadda waxaan jeclahay inaan isfahanay, waxaana kaa rabaa inaad caqligaaga idaymiso. Hadaba, waa maxay caddeynta dakhliga?
Caddaynta dakhliga waa mid ka mid ah saddexda warbixin ee maaliyadeed oo muhiimka ah si loo adeegsado soo gudbinta waxqabadka maaliyadeed ee shirkadda muddada xisaabinta gaar ah, iyadoo labada qoraal ee kale oo muhiimka ahi ay yihiin xaashida haraagga ‘(Balance sheet) iyo bayaanka qulqulka lacagta ‘(the statement of cash flows).
Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa faa’iidada iyo khasaaraha ama cadeynta dakhliga iyo qarashka, caddeynta dakhliga wuxuu si gaar ah diiradda u saaraa dakhliga iyo kharashaadka shirkadda inta lagu gudajiro waqtiga gaar ah.
Fahanka guud ee caddeynta dakhliga
Caddaynta dakhliga ‘waa qayb muhiim ah oo ka mid ah warbixinnada waxqabadka shirkadda ee ay tahay in loo gudbiyo guddiga agaasimayaasha shirkada ama maamulaha ganacsiga.
Waa maxay guddiga agaasimayaasha shirkada? Guji halkaan si’aad wax ugu ogaato: http://www.tukesomalism.com/archives/1129.
In kasta oo waraaqda xisaab-celinta ahi ay siineyso nuxurka maaliyadeed ee shirkadda illaa taariikhda gaarka ah, warbixinta dakhliga shirkada ayaa sheegta dakhliga soo gala waqtiga cayiman, cinwaankiisuna wuxuu muujinayaa muddada, oo loo akhrin karo “Sannad-xisaabeedka / sannad-maaliyadeedka dhammaaday. ”
Caddeynta dakhliga wuxuu diiradda saarayaa afarta shay ee muhiimka ah sida – dakhliga, kharashyada, guulaha, iyo khasaaraha.
Caddeynta dakhliga ma dabooleyso rasiidaha (lacagta ganacsiga uu helay) ama lacag bixinta (lacagtii ganacsigu bixiyay).
Waxayna ku bilaabmaysaa faahfaahinta iibka, ka dibna waxay u shaqeysaa si ay u xisaabiso dakhliga saafiga ah iyo ugu dambeyntii dakhliga ku soo gala qayb kasta ‘(earnings per share (EPS). Sidoo kale, waxay bixisaa koontada sida dakhliga saafiga ah ee ay shirkaddu u gaarto loo beddelo dakhliga saafiga ah (faa’iido ama khasaare).
Tags: Waa Maxay Caddaynta Dakhliga ‘Income Statement?
Next post Cabsi Laga Qabo Nabaad-Guurka Moxorka iyo Yagcarta!
Previous post Sheeko Ku Saabsan Maalgelinta Waqtiga